काठमाडौंको आकाशमा एकाएक किन घुम्दैछ सेनाको हेलिकोप्टर ? यस्तो रहेछ कारण — Sanchar Kendra
काठमाडौं । बिहानैदेखि काठमाडौंको आकाशमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर घुमिरहेको छ । राजधानीको कोलाहलका कारण धेरैले हेलिकप्टर घुमेको अत्तोपत्तो नपाएपनि केहि २/४ राउण्ड घुमेको थाहा पाएपछि केहीका कान भने ठाडा भए ।
देशको शान्ति सुरक्षालाई च्यालेन्ज आएको भन्दै आइतबार मात्रै गृहमन्त्री बादलले संसदीय समितिमा बोलेपछि कति सेनाले हेलिकप्टरमार्फत गस्ती गरेको त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि राजधानी बासीको मनमा उब्जिएको हुनसक्छ ।
नेपाली सेनाले महाशिवरात्रीको दिन सेना दिवस मनाउदै आएको छ । सेना दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले काठमाडौंको टुडिखेलमा बिशेष कार्यक्रमको समेत आयोजना गर्दै आएको छ ।
अघिल्लो बर्ष नेपाली सेना दिवसमा सहभागी हुन भारतीय स्थल सेना प्रमुख विपिन राउत नेपाल आएका थिए। नेपाल एकीकरण भएको सम्झनामा सेनाले मनाउँदै आएको सेना दिवसमा भारतीय सेना प्रमुखको त्यो पहिलो सहभागिता थियो।
यसक्रमको शुरुवात भने सन् १९३५ बाट भएको बताइन्छ । काठमाडौं आसपासमा केही हप्ता अगावै आकाशमा सेनाका हेलीकप्टरका लर्को र हवाई परेड अभ्यास देखिन थालिएको छ ।
उसो त महाशिवरात्री पर्वकै दिन नेपाली सेनाको स्थापना दिवस संयोगमात्र होइन, तत्कालिन राजा पृथ्वीनारायण शाहको कमाण्डमा नेपालको पहिलो सैनिक संरचना शिवरात्रीकै दिन बनेको इतिहास साक्षी छ ।
नेपाली सेना कति सालमा स्थापना भयो भन्ने ठ्याक्कै मिति पाइदैन । तर सन् १७४४ अर्थात विक्रम संवत १८०१ देखि नेपाली सेनाले यो मुलुकको स्वतन्त्रता,अखण्डता र सार्वभौकिताको रक्षा गरेको इतिहास छ ।
व्यारेकीय संरचनाको हिसाबले नेपाली सेना विक्रम सम्बत १८१९ फागुन १० गते पोरखा गोरख गणका रुपमा स्थापित भएको इतिहासकारहरुले विभिन्न सन्दर्भमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसअघि नेपाली सेना रहे पनि गण बनिसकेको थिएन ।
तर करीव दुई सय वर्ष त्यो सेनाले खासै कुनै लडाइ लडेको पाइदैन । भगिरथ पन्तको कमाण्डबाट शुरु भएको गोरखा राज्यको सेना हाल नेपाली सेनाका रुपमा गौरव शमसेर जबराको नेतृत्वमा छ ।